Nke laptọọpụ ka anyị kwesịrị zụrụ nke nwa anyị? - News Ọchịchị
Nke laptọọpụ ka anyị kwesịrị zụrụ nke nwa anyị?
Isiokwu a na-akpọ “Nke laptọọpụ ka anyị kwesịrị zụrụ nke nwa anyị?” e dere site Jack Schofield, maka theguardian.com on Thursday 5th November 2015 09.31 UTC
Anyị na-eche echiche nke na-nwa anyị nwoke a ji ede ihe ma ọ bụ laptọọpụ maka ya iteghete ụbọchị ọmụmụ. Ọ ga-mkpa software dị ka Okwu, PowerPoint na Excel, na na oge o nwere ike inwe n'ime internet nzuzo. M na-eche na ọ ga-ezi echiche ma ọ pụrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ya otú ọ nwere ike iji a iche iche òké na keyboard.
Anyị chọrọ iji hụ ọ dịruru ya n'ihi na a mgbe ma anyị nwere ike imeli na-emefu ego. Kerry
Dị ka m nwere ike ịgwa m kwa afọ nleta Ndina (N'oge gara aga, British Educational Ọzụzụ na Technology Gosi), kasị ụlọ akwụkwọ ugbu a na-eji n'ji-ọkwa Android / Apple mbadamba na Windows laptọọpụ. Otú ọ dị, Ndina 2015 gosiri a-emekarị n'ebe Windows 2 na-na-1 "detachables", nke bụ ihe m akwado.
A kemwepu (M mere na elu) bụ a Windows kọnvatịbụl ebe a aka-ihuenyo mbadamba plọg n'ime a keyboard n'ọdụ ụgbọ mmiri. Maara nke ọma ihe atụ na-agụnye Asus T100TAF na ihe niile Microsoft na-ebupụta. Dual arụmọrụ pụtara ụlọ akwụkwọ na-adịghị ịzụta iche iche mbadamba na laptọọpụ, mgbe Windows App Studio na-eme ka ọ dị mfe maka nkụzi ike mfe Windows 10 ngwa ọdịnala na-enweghị nzuzo.
Na-adịghị ike njikọ ke laptọọpụ bụ mgbabere uzo, na ndị mmadụ nwere mesie mgbabere uzo site eweli ha laptọọpụ site ihuenyo. Bad echiche. Na detachables, meziri-na-emekarị nwetara site ike nju, na-adabere anya ọtụtụ obere na-emebi emebi. N'ezie, ụfọdụ kemwepu enweghị adabere - eg na Lenovo Miix 3 na forthcoming Dell XPS 12 - Ma unu apụghị mfe ịgbanwe n'akuku nke ihuenyo.
M ga-ya mere na-atụ anya a kemwepu-adịru ogologo oge karịa a omenala laptọọpụ, ma ọ bụ a kọnvatịbụl na a 360-ogo mgbabere uzo.
Windows 10 adịghị nwere dị ka ọtụtụ mbadamba ngwa ọdịnala dị ka Android, ma ọ bụ àgwà nke Apple iPad apps, ma ọtụtụ ebe na-kpuchie, ha, ha na nnoo a free ego. Mgbe e bụghị a Windows ngwa, i nwere ike ka na-eji zuru ike (mma karịa mbadamba-edu) nchọgharị weebụ na-agba ọsọ ọtụtụ nde omenala Windows omume. Ọzọkwa, n'ezie, E nwere ọtụtụ ụzọ na-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na Windows PC, dị ka BlueStacks na AmiDuOS.
Laptọọpụ maka ụmụaka
The ntinye-larịị laptọọpụ maka ụmụaka bụ HP Stream 11. Nke a bụ nnọọ siri ike n'ihi na ya ala price (£ 169,97 ka £ 199,99), ma ọ dịghị nwere ihuenyo mmetụ, na ákwà ngebichi bụghị kemwepu.
N'ihi na n'oge gara aga ọnwa ole na ole, acha uhie uhie HP Pavilion X2 10-n055na kemgbe m ghota nke detachables na £ 249,99. Ọ na-ele ndị ọzọ siri ike karịa ochie Asus T100TAF, nwere a mma keyboard, na a ezigbo ihuenyo. Otú ọ dị, Asus ka ulo oru T100HA, nke mma na Pavilion X2 10, Ọ bụ ezie na keyboard bụ ubé nta.
The Asus T100HA bụ otu n'ime ndị mbụ mkpọsa laptọọpụ ka ụgbọ mmiri na Windows 10 preinstalled, na Windows 8.1 igwe ugbu a sụrụ si na ụlọ ahịa. PC World, ọmụmaatụ, na-ere HP Pavilion X2 10 na Windows 8.1 maka £ 199,97, otú ahụ ka m ga-anya ma ọ bụrụ a Windows 10 version-egosi n'oge na-adịghị.
M na mbụ leghaara Acer Gbanye 10 na 11 n'ihi na ha na-eri ihe - emekarị £ 300 £ 350 - ma Mgba ọkụ 10E nwere ike ịbụ uru a anya na £ 229,95. M nakwa leghaara Toshiba Satellite Pịa Mini, n'ihi na m na-eche na 8.9in ihuenyo bụ nnọọ obere. Ma ọ bụrụ na Windows magnification ọnọdụ na-aga elu nke ọma, ikekwe ọ bụghị kwa obere ka nwatakịrị. Ị ga-enwe ike iji tụnyere ma ndị a ígwè ọrụ na-Asus T100HA na a John Lewis ụlọ ahịa, na John Lewis na-agụnye a na-afo nkwa.
All nke a ntinye-larịị abụọ-in-n'anya nwere Atọm dabeere processors na 2GB nke isi ebe nchekwa, na a 32GB eMMC Flash ebe nchekwa mgbawa na-enye nchekwa. Ha ga-abụ nnọọ mma na 4GB nke ebe nchekwa na 64GB nke nchekwa, ma ígwè ọrụ dị otú bụ ike ịhụ, na-eri ihe. The ngwa ngwa fix bụ tinye ihe mmezi 32GB ma ọ bụ karịa nchekwa na a microSD kaadị. Ọ bụrụ na ịzụta a abụọ-na-otu na Windows 8.1 na nkwalite ọ na-Windows 10, tinye kaadị mbụ: otu n'ime ndị 32GB ígwè m kwalite-enweghị free ohere rụchaa echichi.
M na-anya isi na £ 250 bụ ihe kasị ị ga-achọ na-emefu na a laptọọpụ maka a nwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-eji obere, anya n'ihi na a ịkpụ-price Lenovo Miix 3. Ọnwa atọ gara aga, M zụtara onye ọhụrụ £ 150, ma taa m ga-esi a £ 250 Asus T100HA kama.
Kasị laptọọpụ ga-arụ ọrụ na a "eluigwe na ala" ebe ntibànye, dị ka Plugable UD-3900, ma anaghị m eche na ị chọrọ otu. Kasị laptọọpụ ga-ekwe ka ị ikwunye na mpụga USB ma ọ bụ Bluetooth keyboard enweghị na-eji a ebe ntibànye. E nwere ọtụtụ yi keyboards e mere kpọmkwem maka ụmụaka, na ọtụtụ aka-dee Nkuzi.
Otú ọ dị, na Asus T100HA nwere ọhụrụ USB Ụdị C n'ọdụ ụgbọ mmiri, otú ị ga-mkpa a obere nkwụnye.
M na-ewere na ị na-eme atụmatụ na-usoro nchịkwa maka gị na nwa gị na laptọọpụ, na-enye ya onwe ya nwa akaụntụ. A na-ahapụ gị ịtọ oge ókè, igbochi-ekwesịghị ekwesị weebụsaịtị, setịpụrụ afọ ókè maka egwuregwu, na ezipụta ego ole (ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla) o nwere ike na-emefu online. Ị nwere ike ịchịkwa ntọala ndị a remotely si account.microsoft.com/family.
Windows 8.1 na 10 ga email Ị a kwa izu ndekọ nke gị na nwa gị na-eme: otú ọtụtụ awa ọ na-eji ya PC, na weebụsaịtị ọ na-gara, na ogologo oge ọ nọrọ ya mmasị ngwa. Ị na-adịghị eji ọrụ a - na ọ bụ ịnara - ma ọ agbanwuru ndabara.
E nwere azụmahịa uzo ozo dị ka Magic Desktop, ma nke ahụ bụ n'ezie maka tọrọ ụmụaka.
Ị kwesịrị ị na abanye na laptọọpụ site n'oge ruo n'oge, -eji gị nchikwa, -elele na ihe niile bụ OK. Child akụkọ ndị mara mma ná nchebe, na Windows 10 a na-emelite na-akpaghị aka, ma ọ bụ ezi echiche iji na-anya na ihe, na-agba ọsọ extra mgbochi nje ndenye ego.
Ịgba nwa gị nwoke ịzọpụta akwụkwọ, photos na ndị ọzọ na faịlụ ka ya akaụntụ Microsoft si free OneDrive online nchekwa, na / ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa SD. Ị nwere ike ruo nwa oge ịgbanwee kaadị ahụ ka gị onwe gị na PC ndabere ya na tinye photos, ọkacha mmasị music faịlụ, YouTube videos ndị ọzọ na ọdịnaya.
E nwere free nsụgharị nke Microsoft Office omume na OneDrive, na ị nwere ike iwunye ụfọdụ ka free ngwa ọdịnala si Windows Store. Echeghị m na ọ bụ ọnụ ahịa ịzụ ma ọ bụ wụnye zuru desktọọpụ omume maka a 9 afọ, ọ bụrụ na i tụrụ ụtụ Office 365 Home. A na-enye zuru Office ụlọ a maka mmadụ ise na PC, Macs, mbadamba na smartphones, gbakwunyere a terabyte nke nchekwa maka ọ bụla onye ọrụ, maka £ 79,99 a afọ. Ma ọ bụghị, LibreOffice bụ a free ọzọ.
Ị nwekwara ike-eji wụnye Minecraft dị ka usoro ihe omume ma ọ bụ onye ngwa, na Ọkọ mmemme gburugburu ebe obibi - nwere anya na Mmalite nkwado na ọkọ mbụ - na Khan Academy. Ị nwere ike magide ndị a na ndị ọzọ omume ka taskbar, ma ọ bụ tinye aịkọn na desktọọpụ, iji mee ka ha mfe inweta.
34597	1 Nkeji edemede, jụọ Jack, Mgbakọ, Atụmatụ, Jack Schofield, Laptọọpụ
← Apple TV review (2015) [Na] Gị Appliances Ndi-ezu Ị Blind, agha Back! →